स्टेनलेस स्टील प्लेट निर्माता - चीन स्टेनलेस स्टील प्लेट फैक्टरी, आपूर्तिकर्ता
304 ब्रश निकल पाना धातु सुनको रंग निकल पाना धातु कंपन 304l स्टेनलेस स्टील प्लेट्स समाप्त
304 रंग ब्रश स्टेनलेस स्टील पाना के हो?
304 स्टेनलेस स्टील तार रेखाचित्र प्लेट स्टेनलेस स्टीलको सतहमा तार जस्ता बनावट हो।
यो स्टेनलेस स्टीलको प्रशोधन प्रविधि मात्र हो। सतह मैट हो, र त्यहाँ बनावटको ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक छ, तर यो महसुस गर्न सकिदैन।
यो सामान्य भन्दा बढी लगाउने प्रतिरोधी हो चमकदार स्टेनलेस स्टील र अझ उन्नत देखिन्छ।
सुन्दर सतह र विविध उपयोग सम्भावनाहरू; राम्रो संक्षारण प्रतिरोध, साधारण इस्पात भन्दा लामो स्थायित्व, उत्तम जंग प्रतिरोध; उच्च शक्ति, त्यसैले पातलो प्लेटहरू प्रयोग गर्ने सम्भावना; उच्च तापमान ऑक्सीकरण र उच्च शक्ति, ताकि यो आगो प्रतिरोध गर्न सक्नुहुन्छ; सामान्य तापमान प्रसंस्करण, कि छ, सजिलो प्लास्टिक प्रसंस्करण। किनकि त्यहाँ सतह उपचारको लागि कुनै आवश्यकता छैन, यो सरल र कायम गर्न सजिलो छ; सफा, उच्च फिनिश; राम्रो वेल्डिंग प्रदर्शन
1२१ तातो रोल गरिएको स्टेनलेस स्टील प्लेट
1२१ / 1२१ एच स्टेनलेस स्टीलको बारेमा विवरण
यसले g००-११500° डिग्री सेल्सियस (7२16-8१° डिग्री सेल्सियस) र क्रोमियम कार्बाइड वर्षामा तापक्रममा अन्तर्क्रियात्मक जंगलाई राम्रो प्रतिरोध कायम गर्दछ। संरचनामा टाइटेनियमको थप कारणले, 1२१ तातो रोल्ड स्टेनलेस स्टील प्लेटले अझै पनि क्रोमियम कार्बाइड गठनको अवस्थामा स्थिरता कायम राख्न सक्छ।
1२१ तातो रोल गरिएको स्टेनलेस स्टील प्लेटमा यसको उत्कृष्ट म्यानिकल गुणहरूको कारण उच्च तापमान वातावरणमा फाइदाहरू छन्। 4०4 मिश्रको साथ तुलना गर्दा, 1२१ मिश्र स्टेनलेस स्टीलको तनाव फ्रैक्चरको लागि राम्रो लचीलापन र प्रतिरोध क्षमता छ। थप रूपमा, 4०4L लाई पनि विरोधी-संवेदनशीलता र intergranular क्षति को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ।
मिश्र 32२१ (UNS S32100) एक धेरै स्थिर स्टेनलेस स्टील हो। यसले g००-११500° डिग्री सेल्सियस (7२16-8१° डिग्री सेल्सियस) र क्रोमियम कार्बाइड वर्षामा तापक्रममा अन्तर्क्रियात्मक जंगलाई राम्रो प्रतिरोध कायम गर्दछ। संरचनामा टाइटेनियमको थप कारणले, 1२१ तातो रोल्ड स्टेनलेस स्टील प्लेटले अझै पनि क्रोमियम कार्बाइड गठनको अवस्थामा स्थिरता कायम राख्न सक्छ। एलोय 34 347 यसको स्थिरता कायम राख्न नियोबियम र ट्यान्टलमको थप कारण हो। ।
मिश्र 32२१ र7347 सामान्यतया temperature००-१-1०० डिग्री सेल्सियस (7२7-8१16 डिग्री सेल्सियस) मा उच्च तापमान वातावरणमा दीर्घकालीन कार्यका लागि प्रयोग गरिन्छ। यदि अनुप्रयोगमा केवल वेल्डिंग वा छोटो-समय हीटिंग समावेश छ भने, यसलाई 4०4L सँग बदल्नुहोस्।
Temperature२१ र7347 मिश्रको उच्च तापमान अपरेशन लाभ पनि तिनीहरूको राम्रो यांत्रिक गुणहरूमा निर्भर गर्दछ। 4०4, 30०4एल, 1२१ र7347 सँग तुलना गर्दा राम्रो रमाईलो तनाव र तनाव क्र्याक प्रतिरोध छ। यसले यी स्थिर मिश्रहरूको दबाबलाई उच्च तापक्रममा अमेरिकी सोसाइटी अफ मेकेनिकल इन्जीनियरिंग बोयलर नियमहरू र उच्च तापमानमा प्रेस पोष्ट स्पेसिफिकेशन्स पूरा गर्न अनुमति दिन्छ। त्यसकारण, 32२१ र 77 34 मिश्रको अधिकतम अपरेटि temperature तापमान १ 15०० ° एफ (16१16 डिग्री सेल्सियस) छ, जबकि 4०4, 4०4एल 800०० डिग्री फारेनहाइट (6२6 डिग्री सेल्सियस) मा सीमित छ।
1२१ र एलोय 34 347 सँग उच्च कार्बन सामग्री छ, उनीहरूको UNS नम्बरहरू हुन्: S32109 र S34709।
409 409L तातो रोल गरिएको स्टेनलेस स्टील प्लेट
प्यालेट वजन: 1.0MT - 3.0MT
410 410s तातो रोल गरिएको स्टेनलेस स्टील प्लेट
9० and र 10१० स्टेनलेस स्टीलको बीचमा के भिन्नता छ:
9० — tit टाइटेनियमको थप बाहेक, सस्तो मोडेल, सामान्यतया कार एक्जोस्ट पाइपको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, फेरीटिक स्टेनलेस स्टील (क्रोम स्टील) हो, वेल्डिंगको लागि उपयुक्त, कम लागत, स्टीम लोकोमोटिव निकास पाइप, र आगो पंक्ति।
10१० — मार्टेनाइट (उच्च-शक्ति क्रोम स्टील), राम्रो पोशाक प्रतिरोध र गरीब जंग प्रतिरोध, पम्पिंगको लागि उपयुक्त। यसको रासायनिक संरचनामा १%% क्रोमियम, ०.55% वा कम कार्बन र थोरै मात्रामा अन्य एलिमेन्टल मिश्र हुन्छ। कच्चा माल सस्तो, चुम्बकीय र ताप उपचार द्वारा कठोर गर्न सकिन्छ। सामान्य प्रयोगहरूमा बेयरि,, मेडिकल उपकरण र उपकरण र उपकरण प्यानल, र टेन्सिल भागहरू सामेल छन्।
10१० स्टेनलेस स्टील चीनको 1Cr13 स्टेनलेस स्टील S41000 (अमेरिकी AISI, ASTM) को बराबर हो। ०.०१% कार्बन, ०.33% क्रोमियम ०.410 १० स्टेनलेस स्टील: राम्रो क्षरण प्रतिरोध, मशीनेबिलिटी, सामान्य उद्देश्य ब्लेड, भल्भहरू।
को गर्मी उपचार 10१० स्टेनलेस स्टील: समाधान उपचार (° C) -००- slow००० ढिलो कूलि or वा 5050० द्रुत कूलि।
3030० स्टेनलेस स्टीलको राम्रो क्षरण प्रतिरोध र सामान्य इस्पातको ग्रेड छ, थर्मल चालकता अस्टेनाइटभन्दा राम्रो छ, थर्मल एक्सटेन्शन गुणांक अस्टेनाइटभन्दा कम छ, तातो थकान, स्थिर तत्व टाइटेनियम थप्दै, र वेल्ड साइटको मेकानिकल गुण राम्रो छ। भवनको सजावटको लागि, ईन्धन बर्नर पार्ट्स, घरेलु उपकरणहरू, घरेलू उपकरण भागहरू।
3030० एफ स्टीलको ग्रेड हो जुन 3030० स्टीलमा फ्रि-कटिंग सम्पत्तीको साथ छ। स्वचालित खराद, बोल्ट र नटहरूमा प्रयोग गरियो।
3030०LX ले Ti30० स्टीलमा Ti वा Nb थप्छ, सी सामग्री कम गर्दछ, र प्रक्रिया र वेल्डेबिलिटी सुधार गर्दछ। तातो पानी ट्याks्की, तातो पानी प्रणाली, सेनेटरी उपकरण, घरेलू टिकाउ उपकरण, साइकल फ्लाईव्हील्स, आदि।
3030० तातो रोल गरिएको स्टेनलेस स्टील प्लेट
4०4 स्टेनलेस स्टील र 3030० स्टेनलेस स्टीलको तुलना:
१. जंग प्रतिरोध: 430 स्टेनलेस स्टील १ 16.००-१-18.००% क्रोमियम समावेश गर्दछ, जुन मूल रूपमा निकेल धातुमुक्त छ। 4०4 स्टेनलेस स्टीलमा अधिक क्रोमियम र निकेल धातु हुन्छ, त्यसैले 3030० स्टेनलेस स्टीलको जंग प्रतिरोध 4०4 स्टेनलेस स्टीलभन्दा उत्तम छ।
२. स्थिरता: 430 स्टेनलेस स्टील फेराइट हो, 4०4 स्टेनलेस स्टील अस्टेनिटिक हो, 4०4 स्टेनलेस स्टील stable30० स्टेनलेस स्टील भन्दा बढि स्थिर छ,
T.उठ्ठा: 4०4 स्टेनलेस स्टीलको कडा कडाई छ, भन्दा बलियो छ 430 स्टेनलेस स्टील
Ther.अन्यस्त चालकता: 430 स्टेनलेस स्टील फेराइट 304 स्टेनलेस स्टील austenitic गर्मी हस्तान्तरण प्रदर्शन भन्दा राम्रो छ,
Me.मेकनीकल गुणहरू: 430 स्टेनलेस स्टील टाइटेनियमको एक स्थिर रासायनिक तत्व थपियो, वेल्ड साइटको मेकानिकल गुणहरू 4०4 स्टेनलेस स्टीलभन्दा राम्रो छ।
२7०7 तातो रोल गरिएको स्टेनलेस स्टील प्लेट
२7०7 तातो रोल गरिएको स्टेनलेस स्टील प्लेट के हो
२7०7 फेरीटिक-अस्टेनेटिक (डुप्लेक्स) स्टेनलेस स्टील हो। यो फेराइटिक स्टील र austenitic इस्पात को धेरै लाभदायक गुणहरु संयोजन। किनभने इस्पातले उच्च क्रोमियम र मोलिब्डेनम समावेश गर्दछ, यसले पिटि,, क्र्याभिस क्षय र समान क्षरण प्रति एकदम राम्रो प्रतिरोध गर्दछ। दोहोरो चरणको माइक्रोस्ट्रक्चरले स्टिलको तनावको क्षतिग्रस्त क्र्याकिंगमा उच्च प्रतिरोधको सुनिश्चित गर्छ, र यांत्रिक शक्ति पनि उच्च छ।
के हो स्टेनलेस स्टील चेकर प्लेट
स्टेनलेस स्टील चेकर प्लेट: जाँचकर्ता प्लेटले स्टेनलेस स्टीलको सतहमा बिभिन्न आकार र आकारका प्वालहरू पंच गर्न मेशिनको गुरुत्वाकर्षणको उपयोग गर्दछ। हेरिoneबोन फूल, सानो गोलाकार, बाजरा फूल, पाँच-पिन फूल, गोलाकार उत्तल प्वाल, बटन-आकारको उत्तल प्वाल आदि। विशेषताहरू: १.नन-स्लिप, लामो समय प्रयोग; २. आगो निवारण र ओसिलोप्रुफ, सफा गर्न सजिलो; S.उनिवर्ती प्लेटि process प्रक्रिया फिंगरप्रिन्ट बिना नै गर्न सकिन्छ।
इलेक्ट्रोलाइटिक चमकाने: एक एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट (स्ट्रिड एसिड) को प्रयोग गरेर, पलिश्न गरिने नमूना पोष्ट-वर्तमान (लगभग m एमए) मा राखिन्छ, र एनोड विघटन हुन्छ। वर्तमानको परिमाणको कारण, विस्तारित भागहरू द्रुत रूपमा विघटन हुन्छ, र सतह समतल हुन जान्छ, अन्तिम पोलिश प्रभावमा पुग्न (प्रभाव लगभग १० मिनेट भित्र देख्न सकिन्छ)। इलेक्ट्रोपोलिसि ofको आधारभूत सिद्धान्त: रासायनिक चमकाने जत्तिकै, त्यो छ, सतह चिकना बनाउन सामग्रीको सतहको सानो उत्तल भागलाई छनौट गरेर। रासायनिक चमकानेसँग तुलना गर्दा क्याथोड प्रतिक्रियाको प्रभाव हटाउन सकिन्छ, र प्रभाव अझ राम्रो हुन्छ।
मेकानिकल चमकाने: सजावटी प्रभाव प्राप्त गर्न स्टेनलेस स्टील प्लेटको कुनै न कुनै सतहको लागि यो हुनुपर्दछ: रोलर फ्रेम बेल्ट पॉलिशिंग मेशिनको साथ पालिश गरिन्छ, १२० # घर्षण बेल्टको साथ पहिलो पटक सतहको रंग फ्याँक्नुहोस्, २0० परिवर्तन गर्नुहोस्। # घर्षण बेल्ट, सतहमा फेंक जब रंग माथि छ, #०० # घर्षण बेल्ट परिवर्तन गर्नुहोस् र एक पटक सतह र colorमा फेंक्नुहोस्। त्यसो भए १२०० # घर्षण बेल्ट परिवर्तन गर्नुहोस् र स्टेनलेस स्टील प्लेट सजावटको प्रभाव फ्याक गर्नुहोस्।